Nehurombo, vanhu vazhinji vanotora mogeji havafungi nezve izvo zvekuti vanogona kurwara, kurasikirwa nebasa ravo kana kupinda mune imwe yakaoma mamiriro. Semutemo, solvency matambudziko haamuke nekuda kwe ...
Kugara usina mari yakachengetwa yezuva remvura chisarudzo chisina kujairika. Kunyangwe kunyangwe paine mamiriro akaoma munyika, unogona kugadzirisa bhajeti yemhuri yako nenzira yekuti utange kusevha mari, uchigadzira, nekudaro ...
Mitero yemitero pamafuta epeturu nedhiziri rudzi rwemitero inobhadharwa kune vezvemabhizimusi nemasangano. Kubviswa kwavo kunoitwa kana vachiita mamwe mashandiro ebhizinesi, kusanganisira kufamba kwezvigadzirwa kuyambuka muganho wetsika ...
Sberbank, "Zvehupfumi" pasuru bhangi package: wongororo
Kuti ushandise zviri nyore kwazvo masevhisi eSberbank, vatengi vanogona kubatanidza pachavo se "Mobile Bank" sevhisi, iyo inopihwa nekubatanidza nhare mbozha yemuridzi wemakadhi ebhangi eSberbank institution kwairi. "Mobile Bank" (mutero "Zvehupfumi" ...
Maitiro ekuchinjisa mari kubva kuYandex kuenda kuQiwi zviri nyore, nekukurumidza, pasina kurasikirwa?
Kwemakore, iyo Internet yakave kwete kwete chete nzvimbo yevaraidzo, asiwo nzvimbo yekutengesa, account account, kubhadhara kwebasa rakaitwa, kutengesa uye masevhisi. Ehezve, kufambisa mari ...
Parizvino, nharembozha vanofambisa vanokupa iwe kwete yakanakisa kutaurirana mhando, yakaderera mafoni mitengo, asiwo kugona kutaura kunyange kana iwe wapererwa nemari kuaccount yako ...
Makadhi ebhangi akaunzwa kumusika zvichangopfuura - pakati pezana ramakore rechi20. Kunyangwe izvi, ivo vakave chakakurumbira chigadzirwa nekuda kwekunyaradza kwavanopa kune mushandisi. Panguva imwecheteyo, kadhi ...
Vatyairi vazhinji vanofarira mubvunzo weiyo inishuwarenzi isingagumi. Urwu ndirwo rudzi rwegwara umo mota inogona kudzorwa kwete chete nemuridzi wayo zviri pamutemo, asiwo nevechitatu mapato. Inishuwarenzi isina ...
Mari dzakajairika dzinoshandiswa munyika dzakasiyana dzepasirese dzine simba rakakura pane zvinoitika mumisika yemari. Mari yega yega inosarudzwa nechiratidzo chakakosha. Izvi zvinoita kuti chero chazvo chizivikanwe ...
Zvakawandisa uye kazhinji, vanhu vari kufunga nezve kwavanofanira kukwereta mari nekukurumidza. Uyu mubvunzo unokosha chaizvo. Mushure mezvose, hapana munhu anodzivirirwa kubva mumamiriro asingatarisirwi. Zvichida imwe "nth" mari inozodiwa ...
Chido - chii icho? Kusarudza kukosha kwechido chakanaka
Kazhinji kangani isu tinonyorera kune mamwe masevhisi kumakambani akasiyana siyana atinotiyirwa neshamwari dzedu? Sei tichitenga zvigadzirwa zvakashambadzirwa? Hazvisi izvo chete kuti vagadziri vanopedza yakawanda ...
Sei kubvisa mari kubva Steam? Kuparadza ngano
Saka, nhasi tichaona newe kuti ungabvisa sei mari kubva kuSteam, pamwe nekuyedza kuona kuti pfungwa yedu ndeyechokwadi sei. Chinhu ndechekuti vashandisi vazhinji vanovhiringidzika nenyaya iyi. Saka…
Kana mubvunzo ukabvunzwa pamusoro pemari iri muNorway nhasi, nzvimbo yenyika ino inorangarirwa pakarepo. Kana Norway iri muEurope, saka mari yacho inofanira kunge iri euro. Asi izvi…
Mutemo weinishuwarenzi yekumanikidza wakabuda nguva refu yapfuura, unopa kutambira OSAGO inishuwarenzi. Uye kana wapedza basa gwaro iri, kana kuti wakasiya pamba, kana kuti inishuwarenzi ikapihwa ...
Pensheni Uyezve idhipoiti muSberbank. Mamiriro uye kufarira
Sberbank ndeimwe yemasangano makuru emari muRussia. Vatengi vake havasi vamiriri vebhizinesi chete uye vanhu vamwe nevamwe, asi zvakare vanhuwo zvavo vekuRussia vane avhareji yemari yemari. Zvisinei…
Dzimba dzekugara "Novaya Okhta" muSt. Petersburg: ongororo, tsananguro uye ongororo
Nhasi pane kushingaira kuvandudzwa kwemaguta nemasango eSt Petersburg. Vagari veguta guru vanoda dzimba, asi mutengo waro muguta pacharo wakakwira zvekuti vanogona kutenga imba kunyangwe munzvimbo isina mukurumbira ...
Pamwe hapana munhu munyika medu asingazorote pamba pake. Ehezve, kune nzira dzakasiyana dzekuiwana, semuenzaniso, unogona kutenga yakagadzirirwa imba. Nekudaro, vazhinji vanorota nezve ...
Kunyangwe paine dambudziko remari, inflation, chero shanduko yezvematongerwo enyika, pachagara paine kudiwa kweimba. Mushure mezvose, vadzidzi vanopedza kudzidza uye vanosiya mahostele, vamwe vakaroora, zvinosuwisa, vanorambana uye vanomanikidzwa kuchinjana ...
Zvinoitika kuti munhu anotora chikwereti kubhangi uyezve, nekuda kwemamiriro ezvinhu kana nekuda kwekusada kubhadhara, haaite zvikamu zvemwedzi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zviziviso kubva kunzvimbo yemari ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 4,336 masekondi.